My Little Poem Factory: January 2009
Friday, January 30, 2009 ရွာဝေးလေး
ရွာဝေးလေးရေအပူအပင်ကင်းစွာနဲ့ ညရဲ့ ရင်ခွင်ထက်မှာမင်းအိပ်စက်နေရောပေါ့ . . .။နီယွန်မီးချောင်းတွေ အောက်ကငါ့ရဲ့အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေကိုမင်း သိစေချင်လိုက်တာကွယ်။ညတွေဟာညမဆန်စွာ အပြုံးတုတွေ တပ်ဆင်လို့လမင်းကြီးကို ပျက်ရယ်ပြုနေကြရဲ့ကောင်းကင် ပျောက်နေတဲ့ဒီအခန်းထဲမှာ ငါ . . .မောပန်းလိုက်တာကွယ် ...။မိုးတိမ် အကြားက လမင်းပြူတော့ရွာဝေးလေးဟာမှိန်ပြပြလင်းလို့ လှနေမှာပေါ့ကွယ်ရွာဝေးလေးမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မရှိဘူး၊ဒါပေမယ့်ရွာအဝင်ပေါက်က တမာပင်အောက်မှာခုံတန်းလေး ရှိတယ်။ရွာဝေးလေးက ဘောလုံးပွဲမကြည့်ဘူး၊ဒါပေမယ့်ခုံတန်းလေး ပေါ်မှာညနေစောင်းရဲ့ရင်ခုန်သံတွေ ပွင့်အန်ကြတယ်။ရွာဝေးလေးမှာ ရုပ်ရှင်ရုံမရှိဘူးဒါပေမယ့်ဆေးလိပ်ခုံမှာ လူစုံတယ်။ရွာဝေးလေးရဲ့ ညက . . .ငြိမ်သက်တယ်အေးမြတယ်ကြယ်တွေစုံတယ်မြို့ပြရဲ့ ညှော်နံ့တွေထဲမှာမွန်းကျပ်နေပြီကွယ်တမာရနံ့သင်းတဲ့ ရွာဝေးလေးရဲ့ရင်ခွင်ထဲကို အရောက်ပြန်ခဲ့မယ် ။ + ရိုးမြင့်ကောင်းသစ်(12:15pm 30.5.06 ၊ ပခုက္ကူမြို့) + Labels: home, life, ရိုးမြင့်ကောင်းသစ်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 2:31 AM | Permalink | Comments Monday, January 26, 2009 ဆက်မရေးဖြစ်တော့တဲ့ ကဗျာ
ဟုတ်တယ်ဒါဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆက်မရေးဖြစ်တော့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ။ကမ္ဘာကြီးပြားသွားခြင်းက ကံကောင်းထောက်မသော လွဲချော်မှု့တစ်ခုကို လှလှပပ တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။တည်ဆောက်ခဲ့သမျှအရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်းချည်းပဲလဲကျခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းဟာလည်းသူမဆီကိုချည်းပဲ။ယုံကြည်မှု့တချို့ကိုကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ် ခိုးဝှက်နမ်းရှိုက်နေခဲ့မိသလား"တော်ဖလာ" ရဲ့ လှိုင်းလုံးတွေကသူမကို မျောပါလာလိုက်ရိုက်ချ ယူဆောင်သွားလိုက်နဲ့ဒါ တိုက်ရိုက်ပြနေတဲ့ ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ပဲ၊ကိုယ့်ဂိုးထဲ ၀င်သွားတဲ့ ဘောလုံးတွေအားလုံးငါ ကန်သွင်းခဲ့တာ။အလှပဆုံးသော မှားယွင်းမှုဟာသီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ ကီးစမြင့်ခဲ့တယ်အဲဒီသီချင်းဟာလည်း (ကိုယ့် ဘဝမှာ)အိပ်မက်ထိ ခေတ်စားဆဲပဲ။ဝတ္တရားကျေ မေ့ပစ်ခြင်းရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဟာသတိရခြင်းဆိုတာ ပြောဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ပါသီချင်းလေးရေ............။အဲဒါ ခက်တာပဲ(အရည်ပျော်သွားမှာ စိုးလို့ထင်ရဲ့---)မကုန်သေးတဲ့ စားလက်စ ရေခဲမုန့်ကိုအမှိုက်ပုံးထဲ သူမက ထိုးထည့်ပစ်လိုက်ပြီ။နောက်ဆုံးတော့ ငါဟာ လမ်းခွဲဘူတာလေးပဲ၊ရထားလေးကတော့ တငြိမ့်ငြိမ့် ထွက်ခွာသွားလေရဲ့ဟိုး . . . .အဝေးကို။ဒီကဗျာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုသူငယ်ချင်းမင်း လျှောက်တွေးမနေပါနဲ့ကွာဟုတ်တယ်ဒါဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆက်မရေးဖြစ်တော့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ။ ။ + စိုးလှိုက်ဦး + Labels: love, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:36 AM | Permalink | Comments Sunday, January 25, 2009 နောက်ဆုံးညနေ
အဲဒီတုန်းက ညနေပေါ့ . . . .(အစတုန်းက ညနေလို့ ပြောရင်လည်း ရတာပဲ)တစ်သားမွေးရင် တစ်သွေးလှတဲ့ ညနေညနေတိုင်းမှာ တစ်သွေးလှပြီးညနေပေါင်းများစွာ မွေးဖွားရတာပေါ့အင်းအခုညနေခံစားချက်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး ဖိတ်လျှံတာတောင်ညနေတွေထဲ မစိမ့်ဝင်တော့ဘူးတဲ့ခက်နေတာကနောက်ဆုံးညနေတဲ့ . . . . ၊ဘယ်လောက်ထိ တိုးဝှေ့ကြည့်ရဦးမှာလဲ . . .နောက်ဆုံး ညနေတဲ့ . . . ။ ။ + အလင်းနစ် + Labels: life, အလင်းနစ်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:35 AM | Permalink | Comments Saturday, January 24, 2009 ဒီနေ့
အဲဒီလိုတစ်ခါတစ်ခါ တော့လည်းကိုယ်က ရယ်ရတယ်။ရေဆန်ကို ဆန်တက်လည်း ဒီအတိုင်းရေစုန်ကို မျောလည်း ဒီအတိုင်းပြက္ခဒိန်တိုင်း ပြသဒါးနဲ့ ရက်ရာဇာ ကတော့ ပါစမြဲပဲဒီနေ့ ဆိုတာကလည်း ကိုယ်နမ်းဖို့ မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူရဲ့ ပါးတစ်ဖက်ပဲ မဟုတ်လားအဲဒါကို လက်ခံလိုက်ဖို့ ခက်နေတာပဲ။ဒီနေ့မှာမနေ့ကထက် ပိုညံ့ဖျင်းလာတဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါနေဦးမယ်"အသဲကွဲသီချင်း"တွေလည်း မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင် ခေတ်စားနေဦးမယ်။ဖျတ်ကနဲ ခိုးနမ်းဖူးတဲ့ ချစ်သူရဲ့ ပါးတစ်ဖက်ပေါ်ကပြန်မရတော့မယ့် ရနံ့ဟောင်းလေးတွေလည်း ပါနဦးမယ်။နောက်တကြိမ် ပြန်ဖတ်ခွင့် မရှိတော့တဲ့သူမရဲ့ ရယ်မောသံ လွင်လွင်လေးတွေလည်း ပါနေဦးမယ်။"ပြီးပါပြီ" လို့ စာတန်းထိုးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလည်း ပါဦးမယ်။ဒီနေ့မှာရုံတင်တဲ့ကားက နပိုလီယံရဲ့ "မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး" ဆိုလားရုံပြည့်ရုံလျှံပဲ --------အဲဒါကို လက်ခံလိုက်ဖို့ ခက်နေတာပဲ . . .။ဒီလိုပါပဲ(တစ်ခါတစ်ခါ ...)ကိုယ်က တော်တော်ရယ်ရတယ်ဒီနေ့ကို ဘုရာဟော တစ်ခုလိုလက်ခံလိုက်ဖို့ ခက်နေတုန်းပဲ . . . .။ + စိုးလှိုက်ဦး + Labels: life, love, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:31 AM | Permalink | Comments ဒီအခန်းလေး
ညဦးနဲ့ အတူစိတ်လေလွင့်၏တိုးတိုးလျှလျှခံစားချက်သီချင်းတွေလည်း မရတော့ဘူးကဗျာတွေလည်း မေ့ကုန်ပြီအိမ်ပြန်စိတ်လေးတောင်လမ်းပျောက်ခဲ့ပြီ . . . .။ + အလင်းနစ် + Labels: home, life, အလင်းနစ်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:27 AM | Permalink | Comments အချစ်
မေးလည်း မဖြေနိုင်ဘူးဖြေလည်း မသိနိုင်ဘူးသိလည်း နားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်လည်း မရှောင်နိုင်ဘူး"ဘူး"တစ်လုံး ဆောင်ရင်းသူချမ်းသာကြီးပွား နေလိုက်ပုံများ ...မနာလိုချင်စရာ..။ + စိုးလှိုက်ဦး + Labels: love, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:20 AM | Permalink | Comments Thursday, January 22, 2009 သံယောဇဉ်
သိပ်အစွဲအလမ်းကြီးလွန်းတဲ့သူငယ်ချင်းလေးမို့ရင်းရင်းနှီးနှီးလေး နေလိုက် ပြန်ရင်လည်း ရင်စေ့ကြယ်ရောင်စုံတွေ စောစောစီးစီး ကြွေလာလေမလား စိုးရိမ်လွန်,လွန်လာလို့ ခေါင်းပဲခါလိုက်ရမလား ခေါင်းပဲငြိမ့်လိုက်ရမလား ကိုယ်နဲ့ ကိုယ် အငြင်းပွားနေမိရင် ကောင်မလေးက မကျေမနပ် နှုတ်ခမ်းလေး စူရင်စူ၊ ခါးလေးထောက်ရင် ထောက်၊ ဖနောင့်လေးဆောင့်ရင် ဆောင့်၊ မျက်စောင်းလေးထိုးရင်ထိုးနဲ့ ချစ်စနိုး စိတ်ကောက်ပြဦးမယ်လို့ ပြုံးလိုက်ရင်း မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာ အလျားလိုက် ရှည်မျောထွက်နေရဦးမယ် ။ + စိုးလှိုက်ဦး + Labels: love, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:18 AM | Permalink | Comments ကြောင်
၁။ ကျွန်တော်တွင် “မနက်ဖြန်”ဟု ခေါ်သော ကြောင်ကလေးတစ်ကောင် ရှိပါသည်။ သူကလေး၏ နာမည်ကို ခေါ်လိုက်တိုင်း အလန့်တကြား ခေါင်းလေး ထောင်ကြည့်တတ်၍ ထိုအမူအကျင့်လေးကို ကျွန်တော်အလွန် သဘောခွေ့ပါ သည်။ သူကလေးတွင် ၀ှက်ထားသော လက်သည်းတစ်စုံရှိပြီး စိတ်မရှည်သော အခါများတွင် ထုတ်၍ ကြည့်နေတတ်ပါသည်။၂။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပွတ်တီးပွတ်သပ် နေချင်စိတ်ကလေး ပေါက်နေတတ်ပြီး ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို ကုတ်ခြစ်၍ ထွက်ပြေးသည့်အခါလည်း ထွက်ပြေးတတ် ပါသည်။ စိတ်နှင့်စိတ်၏ ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရာတွင်လည်း စနစ်တကျ ဖုံးအုပ်တတ်သော အလေ့အထလေးလည်း ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အများက ကြွက်ကိုကြောက်လို့ ဟု သမုတ်တတ်ကြပါသည်။၃။ သူကလေး၏အသံမှာ တစ်ခါတစ်ရံ တယောထိုးသံထွက်၍ တစ်ခါတစ်ရံ မိုးကြိုးပစ်သံ ထွက်တတ်ပါသည်။ သူမတူအောင် ထူးချွန်မှုတစ်ခုမှာ သူကလေး၏ မာနတစ်ခွဲသားလေးကို အသံမမည်အောင် လှုပ်ရမ်းတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သူ၏အိပ်မက်ကို ခုန်အုပ်ကာနီးအချိန်များတွင် ပို၍ တိတ်ဆိတ်တတ်ပါသည်။၄။ ကျွန်တော့်အိပ်ရာပေါ်တွင် သောက ခြစ်ရာဆင်းရာများ တွေ့ရသည့်အခါ တိုင်း “ဈေးပေါပေါနှင့် ရောင်းပစ်မည်”ဟု ကြိမ်းဝါးမိတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ များတွင် သူသည် တွေဝေခြင်းများ၌ ရက်ရှည်လများ ဖျားနာတိတ်ဆိတ်သွား တတ်ပါသည်။၅။ ယခု...... သူကလေး တိတ်ဆိတ်နေပါသည်။ ဖျားနာ နေ၍လား........၊ သူ့အိပ်မက်ကို ခုန်အုပ်ဖို့လား......။ဖျားနာနေတဲ့ သူ့အိပ်မက်ကို ခုန်အုပ်ဖို့ လား.....၊ သူ့အိပ်မက်ကို ခုန်အုပ်ဖို့ ဖျားနာနေတာလား.............။ကျွန်တော် သေချာမသိပါ။ သေချာသည်မှာ...... သူကလေး.... တိတ်ဆိတ်နေပါသည်။ ..သူ..က..လေး.....တိတ်..ဆိတ်..နေ..ပါသည်..........................။ + စိုးလှိုက်ဦး + Labels: life, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 9:16 AM | Permalink | Comments Search
Can Access this blog:
လမ်းဆုံးဘူတာလေးကို ဆိုက်ရောက်မလာတဲ့ အနှေးရထားတစ်စီ...ရွာဝေးလေးဆက်မရေးဖြစ်တော့တဲ့ ကဗျာနောက်ဆုံးညနေဒီနေ့ဒီအခန်းလေးအချစ်သံယောဇဉ်ကြောင်လေခိုနေတဲ့ ညနေ